Griffin na-ewebata MagSafe maka 12-inch Macbook | Esi m mac
Griffin na-ewebata MagSafe maka Macbook nke anụ ọhịa 12
Mgbe Apple webatara Macbook nke 12 nke anụ ọhịa nwere obere pere mpe, yana keyboard nru ububa nke na-enyere ọrụ nke ide ihe maka ndị anyị na-etinye ọtụtụ awa n'ihu kọmputa na otu njikọ USB-C, nke kachasị akpọrọ. Ntị, na mgbakwunye na ikike kwụụrụ site na ngwaọrụ ahụ, bụ nke ahụ Apple gaara esi na ụdị ụdị MagSafe na ejiri m ọtụtụ afọ n'ụdị laptọọpụ ụlọ ọrụ dị otú ahụ na nke ahụ na-egbochi laptọọpụ anyị ịga n'azụ eriri mgbe mmadụ gafere ma dọrọ ya, dị ka a ga-asị na ọ bụ ehi na-agba ọsọ.
Ọ bụ eziokwu na USB-C bụ njikọ nke ọdịnihu, Apple nwere ike họrọla na-ahụkarị MagSafe njikọ gụnyere naanị ụdị njikọ ọhụrụ, mana ọ bụ ihe Apple nwere ka anyị jiri ya. Nsogbu ọzọ nke ndị ọrụ zụrụ ngwaọrụ a na-eche ihu bụ na ha enweghị ike iji draịvụ ike ma ọ bụ ncheta USB ha na-eji ruo ugbu a ọ gwụla ma e mere ha na nkwụnye ọkụ ma ọ bụ na ha zụrụ ọdụ ụgbọ mmiri nke Apple na-enye anyị maka obere ego. Ọnụahịa nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 euro.
Ọ dabara nke ọma, n'ahịa anyị nwere ndị nrụpụta dị iche iche nke chọtara azịza maka nsogbu a, karịa ihe ngwọta nwere ike iru Kickstarter ma ọ bụ Indiegogo ego. Griffin, amaara nke ọma maka ngwa ya maka usoro okike Apple, ka kwuputara eriri ọhụrụ nke na - ejikọ njikọ USB-C nke Macbook na nke ọ ga - esote anyị na-agbakwunye chaja nke magnets na-ejikọ.
Okpukpo nke obere ngwaọrụ a bụ naanị 12,8 mm, ya mere anyị nwere ike ịhapụ ya jikọtara na Macbook anyị mgbe anyị na-ebugharị ya. BreakSafe, dị ka Griffin kpọrọ chaja a, dakọtara na njikọ USB-C nke Macbook ọhụrụ ma ọ ga-adị site n ’Eprel maka $ 39,99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Griffin na-ewebata MagSafe maka Macbook nke anụ ọhịa 12
Ndagide na ngwa iji lelee PDF na macOS Sierra 10.12.2